Yakagadzwa naNick Roach mu2008, Elegante temaer inowanikwa muSan Francisco. Iyo kambani inopa 87 yakanaka ye WordPress temaer uye 4 tema premium temaer kune yakawanda kupfuura Vatengi ve200.000. Ndiyo nzira yakakwana yekugadzira yako WordPress nettsted maererano nezvido zvako uye unofarira kunze kwekuti iwe uite chikamu chakakura chekunyora koding.
1 Zvakanakisa Temaer Zvirongwa & Kudhara
1.1 Det gode
1.2 Kwete-Nhingi bra
Zvakanakisa Temaer Zvirongwa & Kudhara
Izvo urongwa huri nyore uye ne $ 39 pagore uyewo mari shoma (kunyange ichiri yakakwana). Inokurudzira kusvika kwakakwana kune zvese zvinyorwa, zvigadziridzo zvinyorwa zvisingagumi, uye rubatsiro rwekutanga rwekusimbisa. Iyo nyanzvi, wepakati pegadziro chirongwa, inowanzova yakakurumbira. Icho chinouya chizere nezvose zvezvinhu zvehupenyu hwako asi ne $ 50 yakawanda (iyi hurongwa inodhura $ 89 pagore) jeg er unowanawo kukwana kwakakwana kune zvose plug-ins uye yakanyora mafirimu Photoshop. Urongwa hwekupedzisira, hupenyu hwehupenyu huri kuronga, ndiyo yakazara yakazara. Kusiyana nezvirongwa zviviri zvokutanga hapana chikonzero chekubhadhara mwedzi wemari pano. Nenguva imwe chete yekubhadhara $ 249 unogamuchirwa kuwana zvese zvinyorwa uye plug-ins, rubatsiro rwebasa rekusimbisa, uye rakagadzirirwa Photoshop mafaira, pamwe chete nemitambo yakabudiswa munguva yemberi yehakenyose.
FunksjonerPersonlig UtviklerLifetime Access
Kuwanika kune mamwe mapulamu
mutengo 39 dollar / gore 89 dollar / gore 249 dollar / gore
Zvisarudzo Zvinoverengeka: Iko kuunganidza kwemashoko kwakakura uye kwakasiyana. Iko kune zvinyorwa zvinoenderana nezvose zvinodiwa, kubva pamablogi kusvika kune mabhizinesi kusvika kune e-handelssteder. Iwe unogona kunyatsogona kuwana chimwe chinhu chinoenderana nezvose zvaunoda uye zvaunofarira. Uye zvechokwadi, vanhu seElegante temaer nguva dzose vanowedzera mitsva itsva kuitira kuti rute zvimwe zvingasarudzwa zvokusarudza kubva zuva rega rega.
rimelig: Mutengo unoshamisa zvikuru. Ikke $ 89 purogiramu yemwedzi, jeg er uri kunyanya kubhadhara $ 1 pamusoro wehurukuro.
Nguva dzose inovandudzwa: Nzvimbo dzakasiyana-siyana dzinoshandura nguva dzose uye dzinogara dzichipa rubatsiro. Zvakakosha kuziva kuti shanduro yekugadzirwa nayo inokosha zvikuru, iyo inonyanya kukosha pazvinosvika pakubata neElegante temaer. Vanhu vakawanda vanopedzisa vachishandisa misoro yakagara yakagadzirirwa sechinhu chakanaka chekugadzira kwavo, kuchinja kodeji nenzira inoita kuti zvirongwa zvive zvakakwana kune zvavanoda. Saka iwe unoda boka rekusimudzira rinoramba richicherechedza kukurudzirwa kwemashizha, pamwe nekusunungura zvinyorwa positur utgjør zvichidikanwa. Uyezve, pasina chinhu chakanaka, kutsigirwa nguva dzose iwe uchapedza nguva yakawandisa kugadzirisa nekugadzirisa zvinetso rute chimwe chinhu chingafamba chakaipa.
Kusununguka kwekushandisa: Zvose mune zvose, Elegante temaer yakanaka nyore kushandisa, kunyange iwe uri newbie; haitore nguva yakareba kuti uwane hombe yezvinhu. Uyezve, Nzvimbo dzakanaka dzinoshandawo kuve nechokwadi kuti zvinyorwa zvinowirirana nezvose zvinowanikwa paIndaneti, kusanganisira Firefox, Explorer, Safari, Chrome, nezvimwe. Jeg er unogona kuchinja pakati pevasikana pasina kuve nekutya.
Koden: Rute dzimwe nyaya dzine kode rute dzimwe dzeshe; Zvinosuruvarisa, Nicks kode haina chakanaka. Nyaya iyi inonetsa zvikuru mune dzimwe nyaya dzitsva dzisina kuongororwa zvakajeka. Kana iwe uri kunetseka nezvekunyora nyaya zvingangodaro zviri nani kunamatira kune dzimwe dzhembera dzakare. Kunyangwe zvingave zvisina kufanana nenyorwa iyo kambani yakave nenguva yakawanda yekugadzirisa mishonga. Uyezve, zvinyorwa zvekare zvakanyatsoongororwa, izvo zvinoderedzawo marudzi ose emakodhi.
Panyaya yekodhi, kune dzimwewo mitsara yekugadzirisa mafambiro ematambudziko nenzvimbo dzinoshandisa dzidzo dzeE ET. Ini pachedu ndakanga ndisingambove nekodzero yekuti nyaya ini handigoni kunyatsopupura izvi.
ePanel: ePanel ndiyo dashbord yemhando yepamusoro uye yekutendeseka, ini ndoga ndinovenga kuti inoshanda sei. Icho hachisi chechokwadi chekuita nenyaya asi ndinofunga kuti ingadai yakave yakanyanya kushandiswa. Zvose mune zvose, ndinongonzwa kuti hazvina kunyatsogadzirwa.
Kana zvasvika pakusarudza zvido, zvakaoma kupinza zvinhu pasi kune imwe hurukuro. Musoro wega wega une simba rakasiyana uye utera uye hutungamiri hwakanakisisa kwauri huchakurukura zvakanyanya rute zvaunoda. Heino kutarisisa zvakanyanya zvidzidzo zvandinoda, zvakarongwa maererano nekushandiswa kwakakodzera.
Nzvimbo dzakasiyana-siyana Zvidzidzo – Kupfuura 80 premium WordPress-temaer, tora pano kuti uone chaiwo madhemoni demos.
Iyi ndiyo musoro wekupedzisira kubva kuElegante temaer uye zvechokwadi inoshamisa.
Zvinoshamisa kuti zvakakura pakuverenga nyore, zvakagadzirwa nehuwandu hwakazara, yakareba-formatstil. Iyo inofanirwawo kugadzirisa kugadzirisa; Fable inoshandisa CSS mhizha mibvunzo kuti itange matanho akasiyana-siyana kuti agone masikirwo akasiyana eefesi. Hapanazve kugovera uye kupukunyuka pamaserafoni kana mahwendefa. Izvo zvinouyawo zvizere ne peji pepa maler uye nhamba shomanana, zvinoreva kuti unogona kugadzira zvakagadziriswa zvirongwa pasina dambudziko rokutarisana nekodhadhi code. Zvose mune zvose, Fable iri nyore, unyanzvi, uye inopa zvinyorwa zviri nyore kuverengwa. Ndiyo hurukuro yakakwana dere-bloggere refu.
Kubva rute giradha-basert tema inopa dzimba dzine nhoroondo dzine simba; inoshanda kuratidza nhau kuburikidza nemufananidzo, kuzadza chinyorwa nemifananidzo.
Iyi nheyo yakakwana kune vanyori vanoda kutsvaga basa ravo mune imwe nzvimbo yepasitori yakafanana nesiti kana mablogi anotsvaga kupa vaverengi vavo nzira iri nyore uye inoyevedza yekufamba kuburikidza nenzvimbo denzozzbobo Izvo zvinogadzirisa chimiro chekutanga zvakakosha pano, sezvo mawebsite akazara nemifananidzo inogona kunge isina kuoma kufamba pamapiritsi nemichina yekushandisa.
Yakagadzwa naNick Roach mu2008, 우아한 테마 inowanikwa muSan Francisco. Iyo kambani inopa 87 yakanaka
ElegantThemes.com recension: Zvinhu Zvose Zvaunoda Kuti Uzive Nezvinhu Zvakanaka
Yakagadzwa naNick Roach mu2008, Eleganta teman inowanikwa muSan Francisco. Iyo kambani inopa 87 yakanaka
Yakagadzwa naNick Roach mu2008, Elegant Themes inowanikwa muSan Francisco. Iyo kambani inopa 87 yakanaka
Ulasan ElegantThemes.com: Zvinhu Zvose Zvaunoda Kuti Uzive Nezvinhu Zvakanaka
Yakagadzwa naNick Roach mu2008, Tema Elegant diowanikwa muSan Francisco. Iyo kambani inopa 87 yakanaka
Yakagadzwa naNick Roach mu2008, teme elegante inowanikwa muSan Francisco. Iyo kambani inopa 87 yakanaka
Cum să remediați problemele limită de memorie PHP în WordPress
30+ Изнајмљивање веб страница на локацији Научна карта Лараван и Лараван на локацији Лараван на блогу
5 Матакаи дон Рубута Рубутун Лабараи ванда ке Ганова
Cara Menyiapkan Buletin Mingguan Automatik yang Didorong oleh RSS di MailChimp
Genties kūrimas aplink savo meną; Vienas mielas žmogus vienu metu
10 pagrindinių veiksmingos „LinkedIn“ rinkodaros taisyklių
Cara Menggunakan Persidangan Telefon Percuma untuk Membina Rakan Kongsi Dalam Talian Anda
Inversão de domínio: compra e venda com fins lucrativos
No Blogger līdz ārštata rakstniekam
Nome de domínio para manequins: Yadda za a saya sunan yankin
웹 호스트 Hurukuro : RoseHosting Nheyo, Bobi Ruzinov
Como criar Mwakpo: ouça amalite Blog desde 2020
6 veidi, kā piesaistīt vairāk e-pasta pierakstīšanos savā emuārā
Ekspertintervju: Angela England om å tjene penger på å gjøre det du elsker
Slider Bapisa Top 5 jQuery Plugin-uri
10 ресурса за паковање бесплатних пакета за трабахо
Nā Nūhou 7 en ho’ohuli in mea heluhelu in ka Blog in loko o nā uku kū’ai
Mantene un ochju patikimumo tikimybė
Hoe u (niet) inkomsten kunt genereren met uw blog-nieuwsbrief. De praktische gids
I-25 I-Web Czcionki internetowe Bezpieczne Bezpieczne kwiWebhusayithi Yakho
Ama-plugin amaningi we-30 adumile kakhulu we-WordPress asekelwe ku-Jumlah Muat turun ku-2016
Temu ramah Host Web: Ketua Pegawai Eksekutif WebHostFace, Valentin Sharlanov
Campania Link Link Chinoita Kuti Mufaro Wakanaka Unofanira Kuva Pamwoyo Wako
Kas yra populiariausia svetainių talpinimo paslauga?
Slik publiserer du boken din nr. 2: Angi tidslinjen og budsjettet
5 причин, почему контент-маркетинг всегда побеждает построение ссылок
Slik flytter du bloggen din fra WordPress.com til et selvtillit vert domene
Kaip galite naudoti antrąjį gyvenimą savo tinklalapiui reklamuoti
Soo bandhigida HostScore.net-Habka Cusub, Xogta-Daran 및 Loogu Talagal In Loo Doorto Martigaliyaha Websaydh
10-nett-tekniske veier om side-fluktocht for WordPress til å dominere
20 необходимых инструментов для малого бизнеса в Интернете
Labākā lētā tīmekļa mitināšana (mazāka par USD 5 mēnesī)
Куам ут амплио вестри Оцена конверзије сајтова: Велок Типс + Студије случаја
웹 사이트 당 15 개의 Gratuiti Scelti di 샘플